Homeसमाचारमेरी बास्सैका सुरज चापागाई (बान्द्रे) को बटै तथा टर्की फर्म, करोडौंको लगानी (भिडियो सहित)
December 28, 2020 admin समाचार 10156
गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखा’नलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले साबित गरि’दिएका छन् । बान्द्रेलाई नचिन्ने सा’यदै होलान् । उनै हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्या’वसाय गरिरहेका छन् । उनले यो व्यावसायमा करोडौंको ल’गानी लगाएका छन् । उनको फर्ममा १० हजार बट्टै रहेका छन् । सुरजको भनाई अ’नुसार एउटा बट्टै २ सयदेखि ३ सयसम्मको हुन्छ भने उक्त बट्टैलाई १ सय ३० रुपैयामा बिक्रि हुने गर्दछ । यो हिसाब अनुसार सुरजको फर्ममा १३ लाख बरा’बरको बट्टै मात्रै रहेको छ ।
यति मात्रै नभई सुरजको फर्ममा बट्टैको अण्डा पनि बि’क्रि हुने गर्छ । उनको फर्ममा बट्टैले दैनिक ८ हजार सम्म’को अण्डा पार्ने गरेको उनी बताउँछन् । सुरजले बट्टैको एउटा अण्डालाई १० रुपैयामा बिक्रि गर्ने गरेका छन् । यस हिसाबमा सुरजले बट्टैको अण्डा’बाट दैनिक ८० हजार कमाउने गरेका छन् । यसरी अण्डाको मात्रै हिसाब गर्दा सुरजले महिनामा झण्डौ २४ लाख कमाउने रहेछन् । जति लगानी त्योभन्दा दोब्बर आम्दा’नी गर्ने सुरज आफ्नै व्या’वसायमा व्यस्त मस्त छन् । – इताजा खबरबाट
September 19, 2020 admin समाचार 13333
June 23, 2021 admin समाचार 4926
April 2, 2021 admin समाचार 5958
अहिले सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान श्रीमतीको वि’वाद भाइरल हुन थालेका छन् । परिवारको विवादलाई युट्यु’वर बोलाउँदै सार्वजनिक गर्दा धेरैलाई अ’प्ठेरो परेको छ । यहाँ पनि यस्तै भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । जहाँ श्रीमान श्रीमतीको वि’वाद देख्न
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231285)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227650)